Ngathi | LINCLASTN DOOR IMVELISO INC
Umnyango odityanisiweyo weJamb
SENZA IZINTO EZIQHELEKILEYO ZAMANYANGO AMANDLA
Sinikezela ngamanqanaba aphezulu okusebenza kweenkqubo kwiinkqubo zokungena emnyango.
I-LincLastn Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava, sinika amanqanaba aphezulu okusebenza kwecandelo kwiinkqubo zokungena emnyango.
Ukunikezela ingqalelo kwiinkcukacha ekusebenzeni kunye nesitayile, ngokudibanisa netekhnoloji yale mihla, iLincLastn izise ukomelela kunye nexabiso kwiinkqubo zokungena ezipheleleyo. Sizimisele ekuphuculeni iindlela zokwakha ngeemveliso ezisemgangathweni, iinkqubo kunye neenkqubo ezixhomekeke ekusebenzeni kwaye zibonelele ngexabiso elikhethekileyo kuyo yonke imveliso kunye neendleko zeenkonzo kumzi mveliso.
LI-ASTNFRAMTM amacandelo ukuba iingcango amandla. Ukusuka kwiminyango yangaphandle yokubola, ukuya kuthi ga ezantsi kutshayela, senza izinto zomnyango zangaphandle ezisebenza ngcono, zifakela ngokukhawuleza kwaye zihlala ixesha elide.
LI-ASTNFRAMTM unikezela ngezinto zokungena kwinkqubo yezicelo zokungena kubandakanya iminyango yeminyango, izitena, i-t-astragal, mullpost.
Iifreyimu zeminyango zizinzile, zihlala ixesha elide, kwaye zonyusa umgangatho kunye nokusebenza kwendlela yokungena xa zisetyenziswa nomnyango wethu. Izakhelo zethu ziza ngeendlela ezahlukeneyo zokutya okuziinkozo ukuncedisa nakuphi na ukwakhiwa kwangaphandle.
LI-ASTNFRAMTM amacango omnyango ayinto edityanisiweyo ye-pvc eveliswa ngaphandle kokubola, ukujija kunye nokwahlukana Zizinto ezomeleleyo kwinkqubo yokungena.
Ukukhetha LI-ASTNFRAMTM ijamb yomnyango edityanisiweyo yobunzulu obuqala ukusuka kwi-intshi ye-4 ukuya kwi-intshi ye-10
Ukukhetha LI-ASTNFRAMTM iijingi zeminyango edibeneyo yobunzulu obuqala ukusuka kwi-intshi ye-4 ukuya kwi-intshi ye-10, uphuculo lwenkqubo yakho yokungena.
LI-ASTNFRAMTM Izitena ezakhiwe ngokudityanisiweyo zibonisa ukungabikho kwesondlo, kwaye zifezekisa ukhuseleko lobungqina bezinye izinto zesakhelo somnyango.
LI-ASTNFRAMTM Iinxalenye ezininzi zeenkungu zi-rof-proff protection, zibonelela ngamandla afunekayo kwiinkqubo zomnyango wepatio okanye iiyunithi ze-sidelite eziqhubekayo.
Umnyango kunye nezinto ezisecaleni zongeza ubukhulu kunye nokwenza iziqwenga zesandi kwiminyango yokungena. I-astragal ayenzi kuphela inkcazo phakathi kweengcango, kodwa ivala isikhewu sobucala obongeziweyo kunye nokuthintela ukukhanya ekungeneni.
LI-ASTNFRAMTM I-T-astragal edibeneyo ayinakho ukugoba, akukho kuvuza, inika ukhuseleko olukhuselekileyo kunye nokusebenza okungathandekiyo kweenkqubo zokungena.
LI-ASTNFRAMTM izinto zomnyango zibonelela ngomgangatho, ukhuseleko kunye nokukhuselwa kweenkqubo zokungena.
Nxibelelana nathi namhlanje malunga nemibuzo ngeminyango ye-WPC, i-T-bar, izitena, kunye ne-T-astragals.
Indlela yeViking eyi-170-2800, iRichmond, i-BC V6V 1N5
SENZA IZINTO EZIQHELEKILEYO ZAMANYANGO AMANDLA.